Beautiful Horn of Africa: SADDEXDII CABDI IYO DARDAARANKII AABBAHOOD
SADDEXDII CABDI IYO DARDAARANKII AABBAHOOD
Aabbe ayaa wuxuu ifka kaga tegey saddex wiil oo mid waliba la odhan jiray Cabdi. Dardaarankii aabbe ee ugu dambeeyey intuusan dhimman kahor ayaa wuxuu ahaa, "Cabdi dhaxal kuma laha maalka aan ifka kaga tegayo."
Saddexdii wiil ayaa muran iyo qalalaasa ka dhex dillaacay oo mid waliba wuxuu isu arkayey in asagu dhaxalku wax ku leeyahay. Markey is mari waayeen, ayaa midkood wuxuu soo jeediyey in ay u tagaan nin abwaan ama caaqil ahaa si uu u kala saaro.
Abwaankii oo degganaa meel aan sidaasi uga fogeyn tuuladoodi, ayey ka dul dhaceen ammin casar ah, weyna u warrameen sababta ay ugu immaadeen.
Abwaankii saddexdii Cabdi wuxuu u kala saaray Cabdi 1, Cabdi 2, iyo Cabdi 3 si uu u kala aqoonsado. Miid waliba wuxuu gogol u dhigay geedo kala durugsan.
Cabdi 1 ayuu cunto u geeyay wuxuuna faray in uu cuno. Xoogaa markuu ka cunay, ayuu u sheegay abwaanka in inta soo hadhay uu u geeyo walaalkii Cabdi 2. Abwaankii hambadii Cabdi 1 ma uusan qaadin oo halkeedi ayuu kaga tegey.
Deetana abwaankii Cabdi 2 ayuu sidoo kale xeero cunto ku jidho u geeyay kuna wargeliyey in uu cuno. Cabdi 2 sidoo kale cuntadii wuu soo hambeeyay wuxuuna faray abwaanka in inta soo hadhay uu u gudbiyo walaalkii Cabdi 1. Abwaankii ma uusan qaadin hambadii Cabdi 2 oo halkey tiil ayuu kaga dhaqaajiyey.
Ugu dambeyntii abwaankii wuxuu raashiin bisil la gaadhay Cabdi 3 waxbana ma uusan soo hambeyn oo xeeradii oo madhan ayuu dhinac isaga tuuray.
Abwaankii saddexdii wiil ayuu kulmiyey wuxuuna u sheegay in Cabdiga aabbahood ka dardaarmay uu yahay Cabdi 3. Sidii ayaa gartii lagu dhammeeyey oo Cabdi 3 wax dhaxal ah ma uusan helin.
Posted by Adan Makina at 5:25 PM
Labels: Competing Interests
JINNI IYO INSI IYO SHEEKO JACEYL
XAABADII INDHOOLAHA ARAGGA U FURTAY
WALAALKII XASADKA AHAA
CAAQIL, WADAAD, IYO GEEL JIRE